Mucaan guddifachaaf kenname, waloo fi hoogganaa Yunivarsiitii Maanchistar ta'e - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Aida Muluneh
Warri adii Lamin Sisee jedhanii waamu. 1950ta dhumarratti barnootaaf gara Ingiliiz kan deemte Yemaarisheet, mucaa hineegne garaatti baatte. Deessee guddisuuf qophii waan hin turref, mucaa deesse 'Lamin' [Afaan Amaaraatiin -Maaliif] jettee moggaafte. Lamin Sisaay ji'a lamatti guddifachaaf kenname.
Ji'oota muraasaan booda haati Lamin mucaakoo deebisaa naa kennaa jettus, osoo hin milkaa'in hafte.
Hojjataan tajaajila hawaasaa Normaan jedhamu, maqaa mucaa kanaa Lamin irraa maqaa isaa Normaanitti geeddare. Achiis maatii guddiftoota adii ta'aniif dabarsee kenne.
Rincicoota kan turan maatiin isa guddisan kunneen, barsiisaa fi narsii turan. Yeroo ijoollummaasaa ''badaa' jechuun ibsa, Lamin. Guddachaa ennaa dhufus maatiisaa guddisaniif 'rakkisaa' tahe.
Fedhii nyaataa dhabe, gara manaa galuu hin barbaadu; walumaagalatti jireenya isaatti gammadaa hin turre. Waggaa 12tti maatiin isa guddisan, lamuu arguu hinbarbaannu jedhanii hojjattoota hawaasummaatti deebisanii kennan.
Umriisaa 18 keessatti manneen ijoollee guddisan afur keessa jooreera. Waggoota kanneen keessattis sarbamni sanyiirratti xiyyeeffatan - qaamaa fi xiinsammuun irra gaheera. Haati isa deesse akka isa gattee deemteefi lammii akka hin qabne itti himu turan.
Erga umriinsaa 18 ta'ee booda, odeeffannoo waa'ee isaafi haadha isaatii argatee mana guddifachaatii bahe. Maqaansaas Lamin irraa gara Noormaanitti akka geeddarame bare.
Xalayaa haatisaa tajaajila hawaasummaaf barreessiteen, ''Mucaakoo Lamin akkamin deebisee argachuu danda'a? Namoota isaa waliin akka ta'un barbaada, akka qoollifamu hin fedhu'' jechuun akka kadhatte hubate. Maqaasaas Noormaanirraa gara Laminitti deebisiise.
Erga mana guddiffachaatii ba'ee booda kophummaan guddoo itti dhagahamaa akka ture Lamin ni dubbata. ''Yeroo ayyaanaa miseensonni maatii ennaa waliin ayyaaneeffatan an kophaa koon ture. Kanumaafi anis har'a ijoollee mana guddiffachaa keessa jiran walitti qabee, jalabultii ayyaana Qilleef irbaata kanin isaan affeeru.'' jedha.
Image copyright benjireid.com
Goodayyaa suuraa Lamin yeroo ijoollummaasaa ''badaa' jechuun ibsa
Erga mana guddifachaatii bahee booda, mana maxxansaa magaalaa Maanchistar jiru keessatti hojii ogbarruu hojjechaa, haadhasaa barbaacha eegale.
Dhamaatii waggoota dheeraan booda, umriisaa 21tti, Gaambiyaa keessa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanif akka hojjachaa turte bare - haatisaa Yemaarisheet.
Lamin waa'ee haadhasaa ennaa dubbatu, ''Suuraa haadhakootii kanin argadhe kolleejjii itti barachaa turte keessaa enna tahu, umriin koos ganna 21 ture. Kunis umriishee wayita abbaakoo waliin walarganiin walqixa. Haati koofi abbaan koo yeroo jalqabaa fi dhumaaf itti walargan galgala ana ulfooftedha.'' jedha Lamin. ''Yemaarisheet dubartii ajaa'ibsiistuudha. Erga haasofne waggaa darbus, yeroo baay'ee wal argineerra.'' jedha.
Har'a Lamin barreessaa kitaabota jaallatamoo hedduu, tiyaatiraa fi waloodha. Kana malees, Chaansilara Yuniivarsiitii Maanchistar ennaa tahu, yunivarsiitiiwwan Ingiliiz lamarraa doktara kabajaa argateera.
''Something Dark'' Lamin Sisaayiin
Lamin waa'ee jirenyaafi hojiilee isaa BBC'f waan jedhe, '' Yogguu waa'ee koofi jireenyaafi falmii manneen guddifachaa keessa dabarse barreessuun na gammachiisa. Karaa keessa dabre namoota biroof qooduun na gammachiisa. Waanin jechuu barbaadu ogabrruun ibsuun ammoo naaf salphata.''
''Walaloon wanta jechuu hin danda'amne hunda jechuun ni danda'ama. Ijoollummaa kootii kaasee, walaloon humna raagaa wayii akka qabu natti dhagahama. Ennaa mana guddifachaa keessan turettis gadda natti dhagahamu walaloodhaanan ibsan ture.'' jechuun fedhii garmalee walaloof qabu ibsa.
''Og-barruuf waaniin gumaache hin beeku. Hojiilee ogbarruu kootiin namoota kakaaseera taanaan, kun na boonsa. ''
Waggoota 15 dura kan barreesse kitaabni ''Something Dark'' jedhamu, seenaa jireenyasaa akka seenessu dubbatama. ''Kitaaba kana Itiyoophiyaa dabalatee waltajjiiwwan biyyoota Afriikaa adda addaarratti dubbiseera, Raadiyoo BBC irrattis seeneesseera,'' jechuun yaadata.
Itiyoophiyaa fi Lamin
''Ofiikoo lammii Ingliizii fi Itiyoophiyaa jedheen of lakkaa'a. Itiyoophiyaaf jaalala addaan qaba.'' jedha Lamin. Yeroo addaa gara Itiyoophiyaa deemuun hojiisaa akka dhiheesse dubbata.
''Barreeffamoonni koo gara Afaan Amaaraatti akka hiikaman hiriyoota koo wajjiin hasawaa jirra. Biyya kanattis yeroo dhihoon sagantaa carraa barnootaa bilisaa nan eegala. Sagantaan kunis barattoota lammii Itiyoophiyaa guddoo fayyada, kanaanis hedduun boona,'' jedha.
''Waanin Ingiliizitti dhaladhee guddadhef Afaan Amaaraa hasawuu hin danda'u,'' kan jedhu Lamin kitaabni isaaa ''Gold from the Stone'' jedhamu gara Afaan Amaaraatti hiikamaa akka jiru dubbata.
Chaansilara Yunivarsiitii Maanchistar ta'ees hojjechaa jirra. ''Akka chaansilarummaa kootti walgahii miseensota boordii yunivarsiitichaa nan gaggeessa; akkasumas barattoota nan eebbisiisa. Sababiin chaansilara ta'ee itti filatame keessaa tokko, barattoota seeraaf carraa barnootaa bilisaa waanin mijeessaa tureefi,'' jedha.